Ezi ziTurbans ziThunyelweyo ziKukhokelela kangangokuba ungafuna enye
I-Curvy Bombshell! Jonga ukuba u-ASHLEY GRAHAM Ugcina njani iintloko ziTshintsha ngeSitayile sakhe
Ekakhulu intombazana ifuna ukuba libhola ebholeni ikakhulu xa ikwindawo ephezulu yoluntu efana nemitshato. Kwiminyhadala enje, ukuchukumisa kwento enemibala kodwa ecekeceke yile nto uninzi lwabafazi banompu. Umbono uhlala ubeka umboniso, ube sisiseko somtsalane, ngaphandle kokudlala ngaphandle komtshakazi, kunjalo, kwaye eyona ndlela ifanelekileyo yokufezekisa oku kukongeza into ye-oomph kwisinxibo sakho ...
Akukho sidingo sokugxininisa ukubaluleka kokujonga isitayile kunye ne-chic njengendwendwe lomtshato kwaye ngombulelo, ukuba awuziva ukhuphuka kwi-sego okanye i-gele, ngoko ke enye inketho emangalisayo onokuyihlola. Xa ucinga ngee-turbans zanamhlanje, ngokoqobo nangayiphi na indlela onokucinga ngayo.
Khawufane ucinge ngemibala eqinileyo edityaniswe nee-tassles, izincedisi zokuthambisa okanye imihombiso eyenziwe ngeplastiki. Zonke ezi zinto zidibene kakuhle kwaye zinokuhendwa kakhulu kuba akukho nto imfutshane ngobuhle. Njengoko kuvela, kuzo zonke iiracards, umqubuko wetrans awuzukuhamba naphi na kwaye iindlela zokhetho ziya ziba nomtsalane ngakumbi ngosuku. Iiturbines ezihonjisiweyo
Jonga ezi zinto zokweba kwisitayile ekufuneka usenze ...
ubuhle entloko entloko isitayile samva uyilo olutsha lwetran uyilo lwetrban isitayile sombane
UJessica Agorye January 24, 2018
Abahlobo abadibanayo bahlala ngokuDibeneyo: Jonga amaXesha ama-8 Mimi Yina kunye no-Nimi Nwafor AbaHlaziyiweyo boNcedo lweSitayile soBuhlobo
Injineli yeFashoni! I-OGO OFFODILE Ngaba yonke intshi ye-Geeky Fashionista
Izitayile eziHambisayo: Ungayikrweca njani into yokuNgcwatywa kunye nokuKhangela okuNkulu kwesi sihloko
U-Kylie Jenner Uhlanganisa uMeyi unokukhutshwa kweGlamour yase-UK: Uthetha ukuba nguMfazi nokuba wenza iMali yakhe